UShungite uyi-black, lustrous, non crystalline mineraloid - ividiyo
Yini i-Mina Reap?
Incazelo yamatshe kaShungite kanye nezakhiwo zokuphilisa ze-crystal metaphysical.
Thenga amatshe ayigugu wemvelo esitolo sethu
IShungite iyi-mineraloid emnyama, ecwebezelayo, engeyona i-crystalline enamaphesenti angaphezu kwangu-98 esisindo sekhabhoni. Iqale yachazwa idiphozi eduzane nedolobhana lakwaShunga, eKarelia, eRussia, lapho ithola khona igama layo. Itshe lelo kubikwe ukuthi liqukethe inani lokulandela umkhondo lama-fullerenes (0.0001 <0.001%).
Incazelo yetshe leShungite
Igama elithi "shungite" ekuqaleni lalisetshenziswa ngo-1879 ukuchaza i-mineraloid enamaphesenti angaphezu kwangu-98 e-carbon. Muva nje leli gama selisetshenziselwe ukuchaza amadwala athwala i-shungite, okuholele ekudidekeni okuthile. Amatshe lawa abuye ahlukaniswa kuphela ngokuqukethwe kwawo kwekhabhoni, kanti i-shungite-1 inokuqukethwe kwekhabhoni ebangeni lesisindo lamaphesenti angama-98-100 kanye ne-shungite-2, -3, -4 kanye -5 enokuqukethwe kumabanga angama-35-80 amaphesenti , Amaphesenti angama-20-35, amaphesenti ayi-10-20 nangaphansi kwamaphesenti ayi-10, ngokulandelana. Kwesinye isigaba, Idwala lihlukaniswe laba elikhanyayo, elikhanyayo kancane, elincane futhi elifiphele ngesisekelo sokukhanya kwalo.
I-crystal inezindlela ezimbili eziyinhloko zesenzeko, ezisatshalaliswa edwaleni lesikhungo futhi njengezinto ezibonakalayo ezihlanganisiwe. I-shungite efuduswayo, engamatshe agqamile, ihunyushwe ukuthi imele ama-hydrocarbon afudukayo futhi itholakala njengongqimba, izingqimba noma amalensi aseduze nokuhambisana nokwakheka kwamatshe, noma umthambo, otholakala njengemithambo enqamula. kungenzeka futhi ukuthi kube njengama-clast ngaphakathi kwamadwala amancane asezintabeni.
Itshe eliyigugu kuze kube manje litholakale kakhulu eRussia. Idiphozi enkulu isendaweni yeLake Onega yaseKarelia, eZazhoginskoye, ngaseShunga, nokunye okwenzeka eVozhmozero. Ezinye izehlakalo ezimbili ezincane kakhulu zibikiwe eRussia, esisodwa siseKamchatka emadwaleni entaba-mlilo kanti esinye senziwe ukushiswa kwempango emayini yamalahle lapho kushisa kakhulu eChelyabinsk. Okunye okwenzekile kuchaziwe kusuka e-Austria, India, Democratic Republic of Congo naseKazakhstan.
Itshe lelo lithathwe njengesibonelo sokwakheka kukaphethiloli we-abiogenic, kepha manje imvelaphi yalo yemvelo isiqinisekisiwe. Amagugu angathuthwanga atholakala ngqo emigqeni engaphezulu kwamadiphozithi akhiwa eshalofini lamanzi elingajulile lamanzi endaweni engeyona yasolwandle evaporitic. Ukulandelana kokutholakala kwe-shungite kucatshangwa ukuthi kufakwe ngesikhathi sokuqhuma okusebenzayo, ngokuhambisana namadwala e-alkaline volcanic atholakala ngokulandelana. Izidumbu ezicebile eziphilayo kungenzeka ukuthi zafakwa endaweni enamachibi aminyene. Ukuhlushwa kwekhabhoni kubonisa amazinga aphakeme okukhiqiza kwemvelo, mhlawumbe ngenxa yamazinga aphezulu ezakhamzimba atholakala ezintweni ezihlangene zentaba-mlilo.
Idiphozithi ethwala i-shungite egcina ukwakheka kwezinsika ihunyushwa njengamadwala womthombo kawoyela. Kukhonjwe ezinye izakhiwo ezinjenge-diapiric-mushroom, ezichazwa njengezintaba-mlilo zodaka. Izinhlobo zesendlalelo nemithambo yegazi, futhi igcwalisa ama-vesicles futhi yenze i-matrix ibe yi-breccias, ihunyushwa njenge-petroleum efudukayo, manje esesimo sebitume metamorphosed.
Idiphozi yamatshe iqukethe inani eligciniwe eligciniwe lekhabhoni elingaphezu kwama-gigatonnes angama-250. Itholakala ngaphakathi kokulandelana kwamadwala we-Palaeoproterozoic metasedimentary kanye ne-metavolcanic agcinwe ngokuvumelanisa. Ukulandelana kudwetshwe ukungena kwe-gabbro, okunikeza usuku lwango-1980 ± 27 Ma, kanye nama-dolomites ayisisekelo, anika iminyaka engama-2090 ± 70 Ma. Kunezendlalelo eziyisishiyagalolunye ezithwala ama-shungite ngaphakathi kweZaonezhskaya Formation, kusukela maphakathi nokulandelana okulondoloziwe. Kulaba obukhulu kakhulu ungqimba lwesithupha, olwaziwa nangokuthi "umkhathizwe okhiqizayo", ngenxa yokuxinana kwamadiphozi amadwala. Izindawo ezine eziyinhloko ezaziwayo zivela endaweni, amadiphozi aseShungskoe, Maksovo, Zazhogino naseNigozero. Idiphozi kaShungskoe yiyona efundwa kakhulu futhi ikhishwa kakhulu.
Itshe belisetshenziswa njengokwelashwa kwesintu kusukela ekuqaleni kwekhulu le-18. UPeter the Great wamisa isikhungo sokuqala saseRussia eKarelia ukuze sisebenzise izindawo zokuhlanza amanzi eziyigugu, azibonela ngawakhe. Wabuye wagqugquzela ukusetshenziswa kwayo ekuhlinzekeleni amanzi ahlanzekile ebuthweni laseRussia. Izici ezilwa namagciwane ze-crystal ziqinisekisiwe ngokuhlolwa kwanamuhla.
Isetshenziswe kusukela maphakathi nekhulu le-18 njenge-pigment yepende, futhi njengamanje ithengiswa ngaphansi kwegama elithi "carbon black" noma "shungite black natural".
Ngawo-1970s, Yaxhashazwa ekukhiqizeni into evikela, eyaziwa njenge-shungisite. IShungisite ilungiswa ngokushisa amatshe anokugxila okuphansi kuye ku-1090-1130 ° C futhi isetshenziswa njengokugcwalisa kwabantu abaphansi.
Incazelo yamatshe kaShungite kanye nezakhiwo ze-crystal metaphysical healing properties
Lawa matshe akholelwa ukuthi anezimfanelo ezingathuthukisa impilo yengqondo yakho, umzimba nomphefumulo ngezindlela ezahlukahlukene.
Incazelo yetshe leShungite kanye nezakhiwo zokuphilisa ze-crystal metaphysical kuyinto enhle kakhulu yokubeka itshe. Ukudlidlizela kwayo okuphezulu kusiza ukwehlisa izakhiwo zomzimba wakho wokomoya endizeni ebonakalayo ukuze ukwazi ukuhlanganisa kangcono ukuhlakanipha kwe-cosmic nezifundo ze-karmic. itshe lingukuhlanza okunamandla futhi lixosha izinto ezisuka empilweni yakho ezingaqeda amandla akho.
Kusukela ezikhathini zasendulo, leli gugu belisetshenziselwa ukuhlanza amanzi. Lokhu kungenxa yomsebenzi wayo osolwa ngokulwa namagciwane namagciwane.
Ucwaningo lwango-2018 luthi i-shungite emagebhugebhu ingahlunga amanzi ngokususa ukungcola nezinto eziphilayo ezifana nezibulala-zinambuzane. Ucwaningo lwango-2017 luphinde lwathola ukuthi i-carbon kusuka ku-shungite ingasusa ama-radioactive compounds emanzini.
Uma ulwa nengcindezi, ukukhathazeka, noma uzizwa ukhungathekile, zama ukugqoka ucezu lobucwebe be-shungite. Noma nini lapho uzizwa ukhungathekile, letha ukunaka kwakho lapho itshe lixhumana khona nomzimba wakho wenyama, vala amehlo akho, bese ugxila ekuphefumuleni kwakho. Phefumulela phezulu ukubala okune, bamba okungu-XNUMX, bese uphefumulela phezulu ukubala kokune. Lokhu kuphefumula okujulile, okunesigqi kuzokubuyisela esikhungweni sakho futhi kuzosiza ukudala ukuthula engqondweni yakho.
Ingabe i-shungite inezinto zokwelapha?
Incazelo yamatshe kaShungite kanye nezindawo zokuphilisa ze-crystal metaphysical zokuhlanzwa ngokomzimba nokuxoshwa emzimbeni, izakhiwo zayo zokuphulukisa zingena ngokujula ezindaweni ezingokomzwelo nezingokomoya, zivumela noma ngubani osebenza ne-shungite ukuthi ahlanze inkambu yabo yamandla amandla ayingozi noma angafuneki.
Kufanele ngibeke kuphi i-shungite endlini yami?
Beka itshe eceleni kombhede wakho noma ngaphansi komcamelo wakho. Ngokufanayo, ungabeka iphiramidi eceleni kwesiqaphi sakho noma i-microwave. Namathisela ipuleti le-vrystal ekhasini elingemuva kwefoni yakho ephathekayo. Ungaligqoka futhi igugu ngendlela elengayo elengayo nezintelezi.
Kuphephile ukugqoka ama-shungite?
Ukugqoka i-shungite ngeke nje kwenze ukuthi ukuphulukiswa kwe-chakra kube namandla kakhulu, kepha kuzodambisa namandla akhishwa kwi-chakra evinjiwe noma eyeqile. Ukungathathi hlangothi amandla kuzokuvumela ukuthi usebenzise ukuphulukiswa kwe-chakra ngokuphepha futhi ubuyisele ibhalansi empandeni.
Ungabona kanjani ukuthi i-shungite ingokoqobo?
Umbala omnyama onamandla uyisibonakaliso sokuqala esahlukile setshe langempela. Imvamisa inezinhlayiya ezinombala onsundu, ompunga noma wegolide. Le yimikhondo yamanye amaminerali afana ne-pyrite, atholakala kusendlalelo esifanayo.
Uwahlanza kanjani amakristalu akho?
Cwilisa i-crystal yakho kubhavu wamanzi ubusuku bonke, noma uyibambe ngaphansi kwamanzi apholile ahambayo imizuzu embalwa. Amanzi anosawoti nawo azokuhlanza amakristalu. Sebenzisa amanzi olwandle noma ingxube eyenziwe ngezipuni eziyi-1-2 zikasawoti ezoncibilika ngokuphelele kuma-ounces angu-8 wamanzi. Hlanza i-crystal yakho emanzini acacile uma usuqedile.
Thenga amatshe ayigugu emvelo esitolo sethu segem
Senza ubucwebe bamatshe we-shungite crystal eyenziwe ngokwezifiso njengamasongo wokuzibandakanya, imigexo, amacici e-stud, namasongo, imihlobiso elengayo… Ngiyacela Xhumana nathi kwesilinganiso.
Amatshe ahlobene ahlobene
Amagugu amasha ayatholakala
Vakashela isitolo sethu
Ikhaya | Izinsimbi zokuzalwa | Xhumana nathi